Usabela abatshali zimali umholi weFreedom Front Plus - Bayede News
Umholi weFreedom Front Plus (FF Plus) uPieter Groenewald uthi osomabhizinisi bangasaba ukutshala imali eNingizimu Afrika ngenxa yesiphakamiso sokudla umhlaba ngaphandle kwesinxephezelo.
Uthule le nkulumo ngemuva kwesikhongeli seqembu lakhe esethulwe ngempelasonto edlule ngaphambi kokhetho lwangoLwezi lulu-1 loHulumeni Bezindawo. UGroenewald uthe leli lizwe linomhlaba owenele nokuthi umbuzo womhlaba usetshenziswa njengebhola lokudlala lezombusazwe.
IKomidi Lesikhashana eSigabeni 25 woMthethosisekelo lisanda kwamukela uMthethosivivinywa ovumela ukuthathwa komhlaba ngaphandle kwesinxephezelo. Amaqembu amabili okuyiDemocratic Alliance neFF Plus baphikisana noMthethosivivinywa.
“Umhlaba akuyona inkinga yokuthi asithuthukisi umnotho. INingizimu Afrika inomhlaba owenele, umhlaba akuyona inkinga. Ngenxa yokudliwa komhlaba ngaphandle kwesinxephezelo uthola amabhizinisi esethi ngeke aze azotshala imali eNingizimu Afrika ngoba anginaso isiqiniseko ngempahla yami. ”
“Ngithi kuyibhola lokudlala lezepolitiki ukusebenzisa umhlaba nokwenza kube yisikhali sokucasha uma kukhona okungahambi kahle ezweni. Kukhona umhlaba owanele. Masibe nobulungiswa, umhlaba ukhona.Hamba uyobheka imibiko yaminyaka yonke yokubuyiswa komhlaba. Lo mhlaba bawuthole kubanikazi bawo, bawuthenga, bawunika abantu abamnyama, bafuna ukulima futhi uyavunyelwa embikweni wonyaka. Amaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye kulawo maphrojekthi ahlulekile,” kunezela uGroenewald.
Uhlelo lweBlack Economic Empowerment
Uthe iqembu limelene nokufukulwa kwabantu abamnyama kwezomnotho nokuthathelwa izinyathelo. UGroenewald uthi le nqubomgomo ihlupha abantu abasha abamhlophe ababengeyona ingxenye yesikhathi sobandlululo.
Ukunwetshwa kwemigwaqo kukhathaza izakhamuzi
Uthi abantu abamhlophe baseNingizimu Afrika abakwazi ukuncishwa amathuba ngenxa yesikhathi esedlule. “Akukho ukuthathelwa izinyathelo, akukho ukufukulwa kwabamnyama kwezomnotho futhi isizathu silula. Uma ubheka eNingizimu Afrika, abantu baseNingizimu Afrika, iningi labantu ngabantu abamnyama. Uma uya emanyuvesi ethu, kunabafundi abamnyama abaphindwe kathathu kunabafundi abamhlophe eNingizimu Afrika futhi ngithi ngeke kube nobulungiswa ukudala isimo esisha lapho izingane zabelungu, ngoba nje zingabamhlophe, azikaze zibe ingxenye yobandlululo, ukuthi bancishwa amathuba ngenxa yesikhathi esedlule. ”
UGroenewald uthi umqondo wokuqiniswa kanye nokufukulwa kwabantu abamnyama kwezomnotho amathuluzi asetshenziswa uKhongolose ukufaka ezikhundleni amaqabane abo kanye nokuzicebisa.
“Inkinga enkulu isekuthatheni izinyathelo, isetshenziswa kakhulu nguhulumeni waKhongolose ukufaka amaqabani awo ezikhundleni. Kuyisikhali abasisebenzisayo ukufaka abantu babo lapho ukuze bakwazi ukwenza kahle inkohlakalo,” kuphetha lo mholi.
Anathi Mtaka Oct 15, 2021